ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အတွက် Kiss လုပ်နည်း5လြယ္ကူလုပ
အတွက် Kiss လုပ်နည်း5လြယ္ကူလုပ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: မေ. 26 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
နမ်းရင်းနှီးတဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်နှင့်လက်ျာလူတစ်ဦးနှင့်ပြုသည့်အခါ, ဒါကြောင့်ရင်ဘတ်-ဿဆာန်ဦးတည်စေနိုင်ပါသည်, မေးရိုး-ကျဆင်းနေမှော်အတတ်. ဒီနေတာကိုးမှုတ်ပေမဲ့, မဟုတ်ပါဘူး. ဒီလွယ်ကူ Step-by-step ကိုလမ်းညွှန်လိုက်နာခြင်းအားဖြင့်, သင်မကြာမီမီးရှူးမီးပန်းကိုမြင်ရန်သင်၏လမ်းခရီးတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်.
လှမ်း 1: တစ်ဦး Kiss အစပြု
အချိန်ကိုက်အရာအားလုံးသည်. ပါးနပ်သောသဲလွန်စကျဆင်းနေခြင်းအားဖြင့်, သင်တို့ကိုလာမယ့်ကမဆိုပဲကိုနမ်းရနိုင်. နမ်းခြင်းအဘို့အ communication ပါဝင်နိုင်ပါသည်: အကျဉ်းချုံးသင့်ရက်စွဲ၏နှုတ်ခမ်းမှာရှာဖွေနေဖမ်းမိလာဆောင်မှာ, အနည်းငယ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှုတ်ခမ်းကိုဝေဖန်, သင်သည်သင်၏ရက်စွဲ၏မျက်မှောက်သို့မျှော်ကြည့်နေကြသည်အဖြစ်ရံဖန်ရံခါနှုတ်ခမ်းကိုက်နှင့်အတူပြုံး, သို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းတောက်ပြောင်မှု / ကျော်သွားချောင်းကိုနှင့် minty လတ်ဆတ်တဲ့ထွက်သက်ဝင်သက်နဲ့အတူသင့်ရဲ့ခံတွင်းကို kissable အောင်. ဟုတ်ပါတယ်, သင်နေတဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူရှိနေသောတစ်ချိန်က, အခြားနိမိတ်လက္ခဏာနှင့်ခံစားချက်များကိုညာဘက်အချိန်သူတို့ကိုနမ်းစေခြင်းငှါအခါသိရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်.
လှမ်း 2: ထိုစိတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ခြင်း
ချီးမွမ်းအပ်ပေးတော်မူသောအခါတစ်ဦးနမ်းအတွက်မြှောင်ပင် sexier ဖြစ်ပါသည်. ဟုပြော ဆို. “သင်ရုပ်ချော / ဒါကြောင့်အဆင်းလှ” အနီးကပ်ဆုံးလမ်းအတွက်စိတ်အားထက်သန်တက် AMP ကို​​ကူညီနိုင်. သင်တို့ကိုလည်းပိုမိုနီးကပ်စွာရွှေ့ဖို့သူတို့ကိုသွေးဆောင်နေစဉ်သင်သည်မျက်စိကို lock အဖြစ်သင်၏စကားသံ၏ထုထည်များနှင့်လေသံလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ထိုသူတို့အဘို့အနက်ရှိုင်းသောခံစားချက်များရှိသည်ကြောင်းကိုသင်၏ရက်စွဲပြောပြ.
လှမ်း 3: နမ်းခြင်း Barrier Breaking
ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနမ်းခြင်းရှိမရှိ, အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဖက်နှင့်အတူပထမဦးဆုံးနမ်းခြင်း, သို့မဟုတ်သင်အနမ်းအကြောင်းကိုအနည်းငယ်အာရုံကြောများမှာ, ထိုအနမ်းအတားအဆီးကိုချိုးဖောက်သူတွေကိုအာရုံကြောမငြိမ်သက်ကူညီပေးပါမည်သာမဟုတ်ဘဲသင့်ရဲ့ရင်ခုန်စရာရည်ရွယ်ချက်များကိုပြသပါလိမ့်မယ်. အဲဒီအစားကြီးနမ်းအတွက်သွား, တစ်ဦးပွေ့ဖက်အတွက်အမှီမပြုနှင့်သင့်နေ့စွဲရဲ့ပါးကိုနမ်းပါ. ဒီခြေလှမ်းဖို့အဓိကသော့ချက်နေရာချထားသည်. တစ်စက္ကန့်အနည်းငယ်ရှိနေဆဲဟုနေစဉ်နားသို့မဟုတ်ပါးစပ်အနီးတွင်နမ်းအားမရခြင်းအားဖြင့်သင့်ခံစားချက်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းသွားအောင်. သင်၏နှုတ်ခမ်းကို့စကားနေစဉ်သူတို့ရဲ့စကားကိုနားထောငျသို့ flirty တစ်ခုခုတီးတိုးရွတ်ဆိုခြင်းနမ်းအတားအဆီးကိုချိုးကူညီနောက်ထပ်နည်းတစ်နည်းဖြစ်၏.
လှမ်း 4: ထို Kiss အတွက် Going
နမ်းခြင်းရိုးရှင်းသော Keep. ပထမဦးဆုံးနမ်းခြင်းအတွက်အလွန်အမင်းစိတ်အားထက်သန်တဲ့အလှည့်-off မှာဖြစ်နိုင်. သင်၏နှုတ်ခမ်းကိုညင်ညင်သာသာမခွဲမခွာအတူ, ညင်ညင်သာသာပင်ရှိစေနိုင်တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့နမ်းဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့နေ့စွဲနှင့်အတူနှုတ်ခမ်းကို lock. ဒီအဆင့်မှာ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ရက်စွဲများခဲနောက်ကိုလိုက်ရန်လည်းအရေးကြီးပါသည်. ထိုနမ်းနေစဉ်အတွင်းဘယ်လိုသင့်ရဲ့နေ့စွဲတုံ့ပြန်နှင့်ရွေ့လျားဖို့ဂရုပြု. သူတို့အမှီသို့မဟုတ့်စကားဆိုရင်, သင်ကပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်သောနမ်းခြင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်နိုင်မည်အကြောင်း. အကယ်. မ, နောက်ကျောဆွဲခြင်းအားဖြင့်နမ်းခြင်းအဆုံးသတ်, မျက်လုံးချင်းဖြစ်စေခြင်းငှါသင်၏မျက်စိဖွင့်လှစ်, နှင့်ပြုံးရွှင်နေသော.
လှမ်း 5: post-Kiss Bliss
ဤအနမ်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ပျားရည်ဆမ်းခရီးစင်မြင့်သည်. အကယ်. သင်သည်နမ်းခြင်းကိုပျော်မွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်လက်တဆင့်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ကိုင်ပြီးနှင့်ပြုံးပြသ. သင်ဆက်ပြီးနမ်းသွားနေတယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သေချာပါစေ. သင်တို့သည်လည်းချဉ်းကပ်မှု၏ထောင့်များမှတဆင့်သင့်နမ်းစတိုင်ကိုတက်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်, နမ်း၏အမြန်နှုန်းနှင့်အရှည်, ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်ပြင်းထန်မှုနမ်းပါ, နှင့်နှုတ်ခမ်း positioning ကို. သင်တစ်ဦးကိုကြာနမ်းပြုနေတယ်ဆိုရင်, ရိုးရှင်းစွာအချင်းချင်းရဲ့မျက်စိကိုသို့စိုက်ကြည့်နေနှင့်ယခုအချိန်တွင်ပျော်မွေ့.
ဒီမျှော်လင့်သည်သင်နှင့်သင့်ရက်စွဲသည်များစွာသောအနမ်းပွင်၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ဒီအခိုက်အတန်၏ခံစားချက်များကိုအတွက်ဗျာဒိတ်ကျမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်က. သင်၏မျက်စိထဲမှာလင်းလက်တောက်ပ sparkle ကြစို့, ပြုံးရွှင်နေသောစောင့်ရှောက်, နှင့်မှအရှုံးပေး “သင်တို့သည်လောကီနှင့်ထိပ်ပေါ်မှာင်” ခံစားချက်.